Isamsung yazisa ngeinguqu kwiQhinga ukuze yonyuse ixabiso lenkampani | Iindaba zeGajethi
Isamsung yazisa ngeinguqu kwiQhinga lokunyusa ixabiso leNkampani
Samsung Ayizukuya kwelona xesha lilungileyo, emva kokusilela okungaziwayo njengokumiliselwa kunye nokurhoxa okulandelayo kwimarike yeGlass Note 7. Ukuphucula imeko iiveki, uvile malunga nokuba inkampani yoMzantsi Korea yahlulwe yabini iinkampani ezahlukeneyo inkampani ebambe kwelinye icala kunye nenkampani esebenzayo kwelinye), ngenjongo yokunyusa ixabiso lilonke.
Yintoni kude kube kutshanje yayiyindumasi, kubonakala ngathi iyenzeka kwaye iSamsung ikubhengeze ngokusemthethweni oko Uqeshe abasebenzi bangaphandle ukuba bahlalutye imeko yangoku kwaye bakhethe elona qumrhu libalaseleyo. Singatsho ngokufutshane ukuba i-Samsung ilungiselela ukwahlulahlula ibe ziinkampani ezimbini ezahlukeneyo.
“Sizibophelele ekomelezeni ixabiso lexesha elide labanini zabelo kunye nokuhlala silungile kumagosa ezemali. Izibhengezo zanamhlanje zandisa izinto esiziqale kunyaka ophelileyo kwaye zimele inqanaba elilandelayo kuphuhliso lomgaqo-nkqubo wethu wolawulo kunye nezabelo.
La magama aphethe utyikityo lwe UGqr Oh-Hyun Kwon, Usekela-sihlalo kunye ne-CEO ye-Samsung Electronics ekwabhengeze ukuba le nkqubo yohlalutyo lwemeko iya kuhlala iinyanga ezi-6, nje ukuba igqityiwe ukwenza isigqibo ngalo mbandela.
Okwangoku kufuneka silinde ukubona ukuba i-Samsung isinga phi kwixa elizayo, kodwa yonke into iphakamisa ukuba izakuzama ukwandisa ixabiso langoku, izahlule kwiinkampani ezimbini ezahlukeneyo, nangona sicinga ukuba ngaphandle kokuphulukana nokubaluleka kwayo nangaliphi na ixesha.
Ngaba ucinga ukuba i-Samsung ekugqibeleni iya kuthatha isigqibo sokwahlulahlula ibe ziinkampani ezimbini ezizimeleyo, kodwa ezinxulumene ngokusondeleyo?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Isamsung yazisa ngeinguqu kwiQhinga lokunyusa ixabiso leNkampani
Iliso elitsha le-LG UltraFine 5k elivela kwi-LG ngoku linokugcinwa kwiwebhusayithi ka-Apple
ICyanogen Inc, ukudendwa kwayo kunye nekamva leKondik